Jadon Sancho oo diiday inuu meesha ka saaro u dhaqaaqista Premier League, xilli la la xiriirinayo Kooxda Manchester United – Gool FM
Jadon Sancho oo diiday inuu meesha ka saaro u dhaqaaqista Premier League, xilli la la xiriirinayo Kooxda Manchester United
(Dortmund) 19 Luulyo 2020. Laacibka garabka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho ayaa iska diiday inuu meesha ka saaro suurto-galnimada uu xagaagan ku aadi karo horyaalka Premier League, iyadoo ay socdaan wararka xiddigaan la xiriirinaya dhinaca Manchester United.
Red Devils ayaa muddo dheer raadineysay inay u dhaqaaqdo 20-sano jirkaan, waxaana ay doonaysaa inay soo qaadato haatan marka suuqa kala iibsiga xiddigaha dib loo furo, iyagoo arkay isagoo ku riyaaqaya xilli ciyaareed kale oo xiiso leh oo uu ka helayo kooxdiisa Dortmund.
Wararku waxa ay soo jeedinayaan in Man United ay aad ugu dhowdahay inay heshiis la gaarto xiddigan xulka qaranka England, kaasoo lagu qiimeeyo wax ka badan 100 milyan oo gini, Sancho ayaana hadda diiday inuu meesha ka saaro tallaabadaas.
Markii la weydiiyay su’aalaha ku saabsan mustaqbalkiisa, Sancho waxa uu u sheegay World Soccer Magazine: “Ma aqaanno waxa aan ku dhaho taas.
“Waa ay adag tahay in wax la yiraahdo, taasi waa mustaqbalka, waligaa ma ogaan kartid waxa dhici kara, sidaas darteed waan sugi doonnaa oo waan arki doonnaa.” ayuu hadalkiisa ku daray Sancho.
Sancho, kaasoo sidoo kale la la xiriirinayey Liverpool ayaa dhaliyey 20 gool, waxaana uu sameeyey 20 caawin oo kale 44 kulan oo uu xilli ciyaareedkan u saftay Dortmund.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Deportivo Alaves iyo Barcelona ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay